Zirconium Carbide Upfu, ZrC - Goodao Technology Co, Ltd.
inoshandiswa mukugadzirira kwemhando yepamusoro-soro minda yakadai seyakakwira-kuita yakamisikidzwa carbide, aerospace, simba reatomiki, textileelectronics, kupfeka, yakaoma firimu uye metallurgia kushandisa michina. Iyo nyowani carbonomposite inoshanda matenals inogona kusimudzira yakanyanya tembiricha ngura kuramba kweyakagadzirwa, kuomarara kuomarara kwenzvimbo dzakanyunguduka matenals uye yakanakisahigh tembiricha inomutsa matenals, roketi injini inoshandiswa seyakaomarara propellantraw matenals kusvibiswa, yakaderera oxygen zvigadzirwa
Molecular fomula Zrc
Unhu pfumbu nhema nhema
Nzvimbo yakanyunguduka 3540. C
Kuwandisa 6. 78g / cm3. -
Zvishandiso inoshandiswa mukugadzirira kwemhando yepamusoro-soro minda yakadai seyakakwira-kuita yakamisikidzwa carbide, aerospace, simba reatomiki, textileelectronics, kupfeka, yakaoma firimu uye metallurgia kushandisa michina. Iyo nyowani carbonomposite inoshanda matenals inogona kusimudzira yakanyanya tembiricha ngura kuramba kwemishonga yayo, kukwirira kuomarara kwenzvimbo dzakanyunguduka matenals uye yakanakisahigh tembiricha inomutsa matenals, rocket injini inoshandiswa seyakaomesesa propellantraw matenals
Haixin zvakanakira kushandiswa kwesimbi yakachena yekunyungudika maitiro, isiri-redox processlow tsvina, yakaderera mweya okisijeni
Chirungu zita: Zirconium Carbide
CAS kwete. : 12070-14-3
EINECS kwete. : 235-125-1
Molecular fomula: ZrC
Molecular uremu: 103.2347
Zirconium carbide ceramics. Iyo kemikari fomula ndeye ZrC, grey, yakatarisa kumeso-yakatarisana necubic lattice. Iyo yekunyungudika ndeye 3540 ℃, iyo yekufungidzira kuwanda ndeye 6.66g / cm3, iyo yekupisa yekuwedzera coefficient iri 6.7 × 10-6C-1, iyo microhardness iri 2600kg / mm2, iyo resistivity iri 57 ~ 75 · cm, iyo tembiricha yeakanyanya oxidation iri 1100 ~ 1400 ℃. Insoluble mu hydrochloric acid, asi inogadziriswa mune nitric acid. Poda inowanzoitwa nekuderedza
ZrO2 ine kabhoni, uyezve mushure mekuumbwa, sintering uye ceramics. Inogona kushandiswa se electrode, Refractory Kukuru Mukutonga kwechiFascist uye cathode Erekitironi emission zvinhu.
Rima grey cubic kristaro ine esimbi kubwinya, brittle. Nzvimbo yakanyunguduka ndeye 3540 ℃. Iyo yekubikira poindi ye5200 ℃. Iyo inooneka density iri 6.70g / cm3 Mohs kuomarara 8 ~ 9. Insoluble mumvura inotonhorera uye hydrochloric acid. Inonyungudika muhydrofluoric acid ine nitric acid kana hydrogen peroxide uye inopisa yakatsiga sulfuric acid. Zirconium tetrachloride inoumbwa neyakaitika neklorini gasi pane yakanyanya tembiricha. Pa 700 ℃, zirconia inogadzirwa nekupisa mumhepo uye haina kuita nemvura.
Yakachena kuchena, diki chidimbu saizi, yunifomu kugoverwa, hombe yakatarwa nzvimbo nzvimbo, yakakwira nzvimbo chiitiko, yakaderera density, yakanyanya tembiricha kuramba, oxidation kuramba, simba rakakwirira, kukwirira kuomarara, kwakanaka kupisa kwekushisa.
Zirconium carbide inoshandiswa mu fiber: dzakasiyana zirconium carbide silicon carbide poda zvemukati uye nzira yekuwedzera padyo infrared yekumwa zvivakwa zveiyo fibers, apo zirconium carbide uye nesilicon carbide fiber zvemukati iri 4% (uremu), padhuze infrared inotora zvimiro zveiyo fiber zvakanakisa, wedzera zirconium carbide uye nesilicon carbide mugoko refibre padyo neiyo infrared yekumwa mhedzisiro iri nani kuwedzera mune
musimboti wedenga mhedzisiro;
2 zirconium carbide inoiswa mune nyowani yekupisa yekudziya uye tembiricha inodzora machira: zirconium carbide ine hunhu hwekugona kumedza mwenje unooneka, kuratidza infrared ray, painotora simba remasaini mafupi emamita maviri pazasi pe 95% yezuva, kuburikidza nekushanduka kwekushisa. , Simba rinogona kuchengetwa mune izvo zvinhu, zvakare rine hunhu hwekuratidzira kupfuura 2 m infrared wavelength. Zirconium inogona kushandiswa mumhando nyowani yekuchengetedza kupisa uye tembiricha-inodzora machira.
Zirconium carbide inoshandiswa mune yakaoma alloy, poda simbi, hasha, nezvimwe. Zirconium carbide yakakosha nzvimbo yakanyunguduka, yakasimba simba uye ngura kuramba kweakanyanya tembiricha mamiriro ezvinhu. Hunhu hwayo hwakanakisa hunoita kuti ive neakakura nzvimbo yekushandisa mu cemented carbide. Inogona kuvandudza simba uye ngura kuramba yakaoma chiwanikwa.
4. Zirconium carbide inogona kushandiswa mukupfeka seyakanyanya tembiricha inodzivirira kupfeka kugadzirisa nzvimbo yezvinhu zvezvinhu;
5. Natsiridza kabhoni fiber kuneta kuramba, kuwedzera kupfeka kuramba uye kupisa kwakanyanya kupisa.
Iyo yekushandurwa mhedzisiro yeaerospace kabhoni fiber zvinhu zviri pachena kwazvo.
Pashure: Tantalum Nitride upfu, TaN
Zvadaro: Hafnium Carbide Upfu, HfC
Zirconium carbide upfu Mafekitori
Zirconium carbide upfu Fekitori
Zirconium carbide powder Mugadziri
Zirconium carbide powder Vagadziri
Zirconium carbide upfu Mutengo
Zirconium carbide upfu Quotes